I-Perfect Beach Getaway, Eduze KUKHO KONKE! - I-Airbnb
I-Perfect Beach Getaway, Eduze KUKHO KONKE!
Wrightsville Beach, North Carolina, i-United States
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Amy
U-Amy Ungumbungazi ovelele
Lesi sakhiwo sesitezi sesibili, i-condo esanda kulungiswa kabusha iyizinyathelo ezisuka esihlabathini esingcono kakhulu ogwini lwe-NC. Paka imoto yakho bese ufaka okhiye kubhasikidi ngoba uhamba ibanga ukusuka ezindaweni zokudlela ezinhle, ukuntweza, ukuyothenga nokunye. Unganyathela ekhoneni ungene Esitolo Sokudla sika-Robert esidumile ngazo zonke izinto zakho ezibalulekile. Jabulela ukushona kwelanga nabantu abakhulu ababukele endaweni evamile ngemuva kosuku lokucwiliswa esiqhingini. I-condo iza ne-WiFi kanye ne-cable TV isikhathi sokuphumula esisifanelekele.
Kukhona ikhishi eliphelele elinohhavini, i-stove top, i-microwave, umshini wokugeza izitsha kanye nesiqandisi esiphelele. Igcwele amabhodwe, amapani, nezitsha zalezo zikhathi ongase ufune ukudlela kuzo noma wenze isiphuzo ngaphambi kokuphuma uyofuna umoya onosawoti omningi. kunombhede oyindlovukazi owusayizi we-murphy ovumela indawo eningi uma ungalele embhedeni.
I-condo isendaweni eyodwa ukusuka ku-Banks Channel kanye nezindlu ezi-4 ukusuka ogwini lolwandle. I-Roberts Grocery yizinyathelo eziyi-15 ukusuka ekungeneni kwendawo eyinkimbinkimbi kunoma yiziphi izidingo zegrosa. Asikho isidingo sokugqokisa noma yiziphi izindawo zokudlela/izikhungo zomphakathi eziyi-6 ezikuhambo lwamaminithi ambalwa ukusuka e-condo. Susa iwashi lakho, vala ifoni yakho, futhi ujabulele isimo esimisiwe sesiqhingi.
Abasingathi bangabahlali beminyaka engu-17 baseWilmington. Ziyatholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho ukuze uthole izincomo noma usizo. https://www.vrbo.com/1064211
Hlola ezinye izinketho ezise- Wrightsville Beach namaphethelo